३ वर्षिय छोरालाई अचानोमा राखि खुकुरीले दुई टुक्रा बनाइन् यी आमाले !::Leading Nepal News
३ वर्षिय छोरालाई अचानोमा राखि खुकुरीले दुई टुक्रा बनाइन् यी आमाले !
जेठ १४, काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा निकै नै अप्रिय घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेको छल् । आफ्नै परिवारको सदस्यले अर्का सदस्यको हत्या गरेको, बाबुआमाले आफ्नै सन्तानको हत्या गरेको, छोराले बाबु काटेको, पूर परिवार नै सखाप हुने गरी हत्याकाण्ड भएको आदि इत्यादि । अहिले पनि फेरी अर्को यस्तै हत्याको अप्रिय घटना सार्वजनिक भएको छ ।
भोजपुर जिल्लामा एक आमाले आफ्नै तीन वर्षीय अबोध छोराको हत्या गरेकी छन् । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको बासीखोरा घर भई भोजपुर नगरपालिका वडा नं ९ पानीट्याङकी बस्ने सूर्य थापाकी २५ वर्षीया श्रीमती सम्झना थापाले आफ्नै तीन वर्षीय छोरा सम्बोधन थापाको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनले बच्चालाई अचानोमा राखेर दुई टुक्रा बनाएको प्रहरीको बताएको छ ।
हत्या आरोपी थापाको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको स्थानीय बासिले बताएका छन् । उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।पानीट्याङ्कीमा कोठा भाडामा बस्दै आएकी सम्झनाले आफ्नै भिनाजु रमन राईको घरको माथिल्लो तल्लामा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेकी हुन् ।